प्रकाश १२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१२ त्यसपछि, स्वर्गमा एउटा ठूलो चिन्ह देखियो। सूर्य पहिरेकी, पाउमुनि चन्द्रमा भएकी अनि बाह्र वटा ताराको एउटा मुकुट लगाएकी स्त्री देखा परिन्‌। २ तिनी गर्भवती थिइन्‌। पीडाले गर्दा तिनी चिच्याउँथिन्‌ र प्रसववेदनाले गर्दा तिनी छटपटाइरहेकी थिइन्‌। ३ त्यसपछि, स्वर्गमा एउटा अर्को चिन्ह देखियो। हेर, चहकिलो रातो रङ्गको एउटा अजिङ्गर देखा पऱ्यो। त्यसको सात वटा टाउका अनि दस वटा सिङ थिए र त्यसका टाउकाहरूमा सात वटा ताज थिए। ४ त्यसले आफ्नो पुच्छरले स्वर्गको एक तिहाइ तारा तानेर तल पृथ्वीमा हुर्ऱ्यायो। अनि ती स्त्री सुत्केरी हुनेबित्तिकै तिनको बच्चालाई निलिहालूँ भनेर बच्चा जन्माउनै लागेकी ती स्त्रीको अगाडि त्यो अजिङ्गर उभिरह्यो। ५ तब त्यस स्त्रीले एउटा बालक, हो, एउटा छोरा जन्माइन्‌, जसले सबै राष्ट्रहरूमाथि फलामको डन्डाले शासन गर्नेछ। त्यसपछि तिनको बच्चालाई परमेश्वर अनि उहाँको सिंहासन भएको ठाउँमा लगियो। ६ अनि ती स्त्री भागेर उजाडस्थानमा गइन्‌, जहाँ एक हजार दुई सय साठी दिनसम्म तिनको पालनपोषण होस् भनेर परमेश्वरले एउटा ठाउँ तयार पार्नुभएको थियो। ७ तब स्वर्गमा लडाइँ भयो: माइकल र उनका स्वर्गदूतहरूले त्यस अजिङ्गरसित अनि अजिङ्गर र त्यसका स्वर्गदूतहरूले उनीहरूसित युद्ध गरे। ८ तर त्यो अजिङ्गरले जित्न सकेन र तिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ बाँकी रहेन। ९ त्यसैले, दियाबल अनि सैतान भनिने र सारा संसारलाई ठग्ने त्यो ठूलो अजिङ्गर अर्थात्‌ पुरानो सर्पलाई तल पृथ्वीमा फालियो अनि त्यो सँगसँगै त्यसका स्वर्गदूतहरू पनि फालिए। १० तब मैले स्वर्गमा एउटा चर्को आवाजले यसो भनिरहेको सुनें: “अब हाम्रा परमेश्वरले दिनुहुने उद्धार, उहाँको शक्ति, उहाँको राज्य अनि उहाँको ख्रीष्टको अख्तियार प्रकट भएको छ, किनकि हाम्रा भाइहरूको आरोपक तल फ्याँकिएको छ, जसले हाम्रा परमेश्वरसामु दिनरात तिनीहरूलाई दोष लगाउँछ! ११ तर थुमाको रगतले गर्दा र आफूले साक्षी दिएको वचनले गर्दा तिनीहरू विजयी भए। साथै, मृत्युको मुखमा पर्दा समेत तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई* प्यारो ठानेनन्‌। १२ त्यसकारण हे स्वर्ग अनि त्यसमा बास गर्नेहरू हो, रमाओ! तर पृथ्वी र समुद्रलाई भने धिक्कार छ, किनकि दियाबल तल तिमीहरूकहाँ आएको छ अनि आफ्नो समय थोरै मात्र बाँकी भएकोले त्यो असाध्यै रिसाएको छ।” १३ आफू तल पृथ्वीमा फ्याँकिएको पाएपछि अजिङ्गरले छोरा जन्माएकी ती स्त्रीको खेदो गऱ्यो। १४ तर ती स्त्रीलाई ठूलो चीलको दुई वटा पखेटा दिइयो, अनि त्यस अजिङ्गरले नभेट्टाओस् र एक समय, दुई समय अनि आधा समय तिनको पालनपोषण होस् भनेर उजाडस्थानमा तिनको निम्ति तयार पारिएको ठाउँमा तिनी उडेर गइन्‌। १५ ती स्त्री डुबेर मरून्‌ भनेर त्यस अजिङ्गरले तिनको पछि-पछि आफ्नो मुखबाट नदी जस्तो पानीको फोहोरा ओकल्यो। १६ तर पृथ्वी त्यस स्त्रीलाई मदत गर्न आइपुग्यो र त्यस अजिङ्गरले आफ्नो मुखबाट ओकलेको नदीलाई पृथ्वीले आफ्नो मुख खोलेर निल्यो। १७ अनि त्यो अजिङ्गर ती स्त्रीसित क्रोधित भयो र तिनका बाँकी रहेका ती सन्तानहरूसित लडाइँ गर्न गयो, जसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छन्‌ अनि येशूको विषयमा साक्षी दिने काम पाएका छन्‌।
^ प्रका १२:११ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।